FistBump စျေး - အွန်လိုင်း FIST ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို FistBump (FIST)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ FistBump (FIST) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ FistBump ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ FistBump တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
FistBump များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
FistBumpFIST သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000224FistBumpFIST သို့ ယူရိုEUR€0.00019FistBumpFIST သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000172FistBumpFIST သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000205FistBumpFIST သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00204FistBumpFIST သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00142FistBumpFIST သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00498FistBumpFIST သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000837FistBumpFIST သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0003FistBumpFIST သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000314FistBumpFIST သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00511FistBumpFIST သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00174FistBumpFIST သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00119FistBumpFIST သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0168FistBumpFIST သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0374FistBumpFIST သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000308FistBumpFIST သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000339FistBumpFIST သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00696FistBumpFIST သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00156FistBumpFIST သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0237FistBumpFIST သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.268FistBumpFIST သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0851FistBumpFIST သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0165FistBumpFIST သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00623
FistBumpFIST သို့ BitcoinBTC0.00000002 FistBumpFIST သို့ EthereumETH0.0000006 FistBumpFIST သို့ LitecoinLTC0.000004 FistBumpFIST သို့ DigitalCashDASH0.000003 FistBumpFIST သို့ MoneroXMR0.000003 FistBumpFIST သို့ NxtNXT0.0185 FistBumpFIST သို့ Ethereum ClassicETC0.00003 FistBumpFIST သို့ DogecoinDOGE0.0667 FistBumpFIST သို့ ZCashZEC0.000003 FistBumpFIST သို့ BitsharesBTS0.00862 FistBumpFIST သို့ DigiByteDGB0.00859 FistBumpFIST သို့ RippleXRP0.000744 FistBumpFIST သို့ BitcoinDarkBTCD0.000008 FistBumpFIST သို့ PeerCoinPPC0.00081 FistBumpFIST သို့ CraigsCoinCRAIG0.105 FistBumpFIST သို့ BitstakeXBS0.00985 FistBumpFIST သို့ PayCoinXPY0.00403 FistBumpFIST သို့ ProsperCoinPRC0.029 FistBumpFIST သို့ YbCoinYBC0.0000001 FistBumpFIST သို့ DarkKushDANK0.0741 FistBumpFIST သို့ GiveCoinGIVE0.5 FistBumpFIST သို့ KoboCoinKOBO0.0526 FistBumpFIST သို့ DarkTokenDT0.000207 FistBumpFIST သို့ CETUS CoinCETI0.667